Mkpụrụ obi na-eme ka ihe na-ekpo ọkụ maka ikpochapu nke igwe
Mkpụrụ obi na-eme ka ihe na-ekpo ọkụ maka ikpochapu nke igwe dabere na ihe: 1) nke na - eme ka mgbanwe dị na igwe eletriki na magnetik nke igwe dị n'ihi nsonaazụ nke okpomọkụ (mgbanwe ndị a na - eduga ngbanwe na ọkụ ọkụ na - agbakwunye na ike nke ọkụ eletrik na ntinye ntinye ugbu a) na, 2) na ihe ndi n’eme ka ngbanwe ike nke electromagnetic n’oge kpo oku (ya bu mgbanwe nke ihe n’eme na igwe).
Ihe ndị a metụtara mgbanwe na ntanetị nke ndị na-arụpụta ihe n’oge a na-ekpo ọkụ igwe na
ihe dị iche iche nke atụmatụ enyere nke ngwa ngwa dị elu, yabụ, a ga-achịkwa ike eji eme ihe n'oge usoro kpo oku. N'ọtụtụ oge, ike nke electromagnetic nke onye na-emepụta ihe anaghị anọgide na-adị mgbe ọ na-ekpo ọkụ, mgbanwe a na-emetụta ọdịdị nke oge okpomọkụ-oge.
Ugbo oku na okpomọkụ ọgwụgwọ nke ụgbọala akụkụ mbụ e ji mee ihe na anyị na osisi. Na 1937-1938 elu
A na-egbu olu nke eriri ZIS-5 na osisi anyị na ndị ọrụ
nke ụlọ nyocha VP Vologdin. A rụnyere akụrụngwa ahụ dịka akụkụ nke usoro nrụpụta na-aga n'ihu, nke
e doro akụkụ ndị ahụ ọgwụgwọ na-arụ ọrụ na ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa. Ihe karịrị 61% nke
alt akụkụ nke engines nke ~ ae ZIL-164A na ZIL-157K ụgbọala na-agbasi ike site na ntinye ọkụ.
Mkpa quenching nke Machine Parts Mgbe Ọkụ na-egbuke egbuke.
A na-ejikarị ọkụ ọkụ eme ihe maka ọgwụgwọ elu nke akụkụ.
Categories Technologies Tags itinye n'ọkwa kpo oku, induction elu kpo oku, itinye n'ọkwa kpo oku, igwe na-ekpochapu ume, itinye n'ọkwa quenching elu, itinye n'ọkwa quenching usoro, induction elu quenching, elu quenching, elu quenching ígwè Mail igodo